Blog - ụlọ ahịa dị n'ịntanetị CBD
Delta 8 & Delta 10 THC OZI, ỌhụrụBy james jụrụ September 1, 2021
Delta 8 THC nwere ike nyere gị aka ifelata? Edebere edemede edemede na. https://hightimes.com/sponsored/8-reasons-to-try-delta-8-thc-before-its-too-late/?amp Delta-8 THC ewu ewu arịgoro elu, mana ụbọchị ya yiri ka ọnụọgụ. Agbanyeghị na Delta-8 THC bụ iwu na ọkwa gọọmentị etiti, ọtụtụ steeti na-amachibido ma ọ bụ na-amachibido ire ya n'ofe United States. Ọ bụrụ na ị ka nwere ike zụta Delta-8 THC ebe…
Onye nnọchi anya GPFN Q DecodesBy james jụrụ August 31, 2021
Akụkọ ọgụgụ ọgụgụ ọnwa nke onye nnọchi anya Freak Nasty Echefula ịkekọrịta ndị enyi gị ma ọ bụ gwa ha ka ha gaa ANYANYA SEARCH wee pịnye Agent Freak Nasty maka ihe ndị ọzọ #SpookPorn. I nwekwara ike soro m na TWITTER @laconic93 Anyị nwere ọtụtụ ihe ga -eme maka ọnwa gara aga,…
Onye nnọchi anya GPFN Q DecodesBy james jụrụ July 26, 2021
Ekele, Enyi, na Snitches nke a bụ agbata obi gị SPOOK hacker nke a na -akpọ Agent Freak Nasty na -agbasa ozi PIRATE SIGNAL site na DEEP n'azụ ndị iro., Aghọtara m na enweghị m oge zuru ezu iji mee akụkọ ọgụgụ isi kwa izu ka m wee gbanwee ha akụkọ kwa ọnwa. N'ụzọ ahụ, aga m enweta gị #SPOOKPORN na -edozi…
Onye nnọchi anya GPFN Q DecodesBy james jụrụ June 28, 2021
Ekele. Akụkọ Intel a ga -abụ nke ọma ọzọ. Na -etinye uche na akụkọ sitere na RealRawNews.com na isi akụkọ ndị ọzọ. Maka ndị na -amaghị Dr. Piecznick bụ SUPER SPOOK. Onye chepụtara Tom Clancy mere ka agwa ya bụrụ Jack Ryan mgbe ọ gbasịrị ozi ala ọzọ. Ọ bụrụ na ị hụla ihe nkiri, Hunt For Red October,…
Delta 8 & Delta 10 THC OZIBy james jụrụ June 19, 2021
Steeti Texas kwadoro ngwaahịa Delta 8 & Delta 10 THC Site: Eran Hami Ezitere na 8:56 PM, Jun 07, 2021 Nwelitere ikpeazụ 8:21 PM, Jun 07, 2021 CORPUS CHRISTI, Texas-Ihe ọhụrụ akpọrọ “Nri Ngwọta ahịhịa '' ga -abụ iwu na steeti Texas. Delta 8 tinyere THC ndị ọzọ…
UncategorizedBy james jụrụ June 16, 2021
Nnukwu dose nke CBD na -enyere ụmụ aka aka ibelata ibelata ihe ọmụmụ Meth. Nchọpụta nke mbụ na -egosi na ihe ahụ nwere ike ịba uru n'ịlụ ọgụ megide methamphetamine, nke ghọrọ otu n'ime ihe a na -ahụkarị…
CBD maka mgbake akwara
Isiokwu mkpokọta Red EmperorBy james jụrụ June 16, 2021
CBD maka mgbake akwara Cannabidiol a maara nke ọma dị ka CBD na-aghọwanye ewu ewu ka ọha na eze na-amalite ịghọta uru nke onye mmekọ THC na-adịghị emetụta mmụọ nke nwekwara ike iji maka mgbake akwara mgbe mgbatị ahụ gasịrị. A na -ahụ CBD ebe niile n'oge na -adịbeghị anya. Ị nwere ike nweta ya na kuki, kọfị, mmanụ tincture,…
Mmanụ CBD Maka Mgbu
ỌhụrụBy james jụrụ June 16, 2021
Mmanụ CBD maka Mgbu Ihe edemede a bụ maka ebumnuche mmụta na ozi naanị. Ebumnuche a abụghị inye ndụmọdụ ahụike ma ọ bụ dochie ndụmọdụ ahụike nke dọkịta mbụ gị. A na -adụ ndị niile na -ekiri akụkọ a ka ha na ndị dọkịta ha ma ọ bụ ndị ọkachamara ahụike ruru eru gakwuru. Redem Emperorcbd.com ma ọ bụ ụlọ ọrụ nne na nna ya na -ebu ọrụ maka ihe ọ bụla…
CBD na Nsogbu Opioid
Akụkọ ọhụrụ ekesara n'izu a na -enye ozi ọhụrụ gbasara ka cannabidiol si si na cannabis, ma ọ bụ nke ọzọ akpọrọ CBD, nwere ike inye aka lelee ọnọdụ mberede ọgwụ ọjọọ zuru ụwa ọnụ. Nsonaazụ nsonaazụ nyocha ekesara n'izu a ugbu a na American Journal of Psychiatry na -atụ aro na CBD nwere ike inye aka belata ahụ erughị ala na agụụ ndị…
Ọrịa kansa “na -egbu onwe ya site na iri onwe ya” mgbe ekpughere cannabis
Christina Sanchez, onye na-amụ banyere mkpụrụ ndụ ihe nketa sitere na Mahadum Compultense dị na Madrid, buru ụzọ kọọ na 1998 na TetraHydroCannabinol (THC), ihe bụ isi akụrụngwa cannabis, na-ebute igbu mkpụrụ ndụ tumo mgbe ọ na-ahapụ naanị sel ndị na-abụghị akpụ. mkpụrụ ndụ akpụ abụghị naanị kwụsị ịmụba na ịmụba kamakwa ha bibiri onwe ha, ma n'ụlọ nyocha…